Somaliland News - Jaaliyada Gabiley ee wadanka Canada oo Dawooyin ku Deeqday Cusbitaalka Guud Gabiley:-
Jaaliyada Gabiley ee wadanka Canada oo Dawooyin ku Deeqday Cusbitaalka Guud Gabiley:-
16 Jul, 2009 - Gabiley (Gabiley News) Jahliyada reer Gabiley ee wadanka kanada ayaa Deeq Daawooyin ah ku wareejisay Cubitaalka Guud ee Magaalada Gabiley, Dr. Siciid Muxumed Maaxa ayaa Shalay Si rasmi ah ugu wareejiyay Deeq Daawooyin ah Agaasimaha Cusbitaalka Gabiley Dr.Axmed Ismaaciil Nuur.
Daawooyinkaasi oo isugu jiray Daawooyinka lagula dagaalamo �affection� iyo Daawooyin loogu talo Galay Dumarka uurka leh iyo daawooyin fara badan oo loogu talo galay Caruurta Gaar ahaa shubanka iyo wixii la mid ah.
Dr. Siciid Muxumed Maax oo Gabiley News uga waramay dawooyinkaasi iyo sida ay ku yimaadeen ayaa waxa uu sheegay in Daawooyinkaasi ay soo Gudbiyeen Hayad Samofal ah oo magaceeda layidhaa Health Parterner International oo Degan Wadanka Canada, Waxaana Daawooyinkaasi ku soo tabarucay Jaaliyada reer Gabiley ee Wadanka Canada.
Dr. Siciid waxaa kale oo uu sheegay in daawooyinkaasi ay anfici doonaan ilaa Seddex kun oo qof (3000) , waana Daawooyin aad utayo badan.
Mar aanu wax ka waydiinay Dr.Siciid Muxumed Maax oo ah Doctor Degan wadanka Canda waxyaabaha kale ee ay ku tabarucaan Cusbitaalka Gabiley waxaa uu noo sheegay inay qayb laxaadle ka qaateen Dhismaha Cubitaalka Cusub ee Gabiley isaga oo sheegay inay diyaar uyihiin marka uu dhamaado dhismaha Cusub inay Qalabeeyaan Dhaqtarkaasi iyo inay daawooyinka ka caawin doonaan isha Allaah.
Isaga oo sheegay inay xidhiidh fiican la leeyihiin Gudida Horumarinta Gabiley iyo Maamulka cusbitaalka, waxaanu sheegay inay iska kaashan doonoon Talaabo kasto oo lagu horumarinyo korna loogu qaadayo Caafimaadka Gobolka Gabiley.